Shina 15kV 200A Pabrikan'ny kiho mpiorina | Anhuang
Anhuang manokana amin'ny Elbow Grounding, manome elbow Grounding avo lenta izahay. Mifanaraka amin'ny fenitra IEEE 386, sy IEC ny vokatray.
15kV 200A kihon-tany dia safidy tsara indrindra ho an'ny rafitra herin'ny tany ambanin'ny tany Afaka manome tsipika mivoaka ho an'ny fizahana ny tariby amin'ny fampiharana na fanadinana azo ampiharina.
Ny Elbow Grounding dia afaka mampiasa irery na mifandray amin'i Bushing Insert, Rotatable Feed amin'ny alàlan'ny fampidirana mpanova mound pad sy kabinetra famatsiana herinaratra manodidina azy, izay mety handrafitra teboka iray hita maso.
Ny Elbow Grounding dia misy fifandraisana conductive varahina, mpampitohy famatrarana varahina ary voarendrika miaraka amina insulate avo, fingotra miaro amin'ny fahanterana. Ireo dia mahatonga ny vokatra hiaro tanteraka. Mandritra izany fotoana izany dia misy tariby 2 metatra mifandray amin'ny faran'ny Grounding Elbow. Ny sandan'ny insulation an'ny ampinga ivelany tariby dia 600V, ka rehefa dinihina dia azafady overhead.
Description Reference No. Volan'ny herinaratra mitohy Ny fiantraikany mahatohitra ny herinaratra
15kV 200A kiho mivelatra AH JDZT-15/200 15kV 200A
Previous: 200A Load Break Junction
Manaraka: Mitsangantsangana eny ambonin'ny bushing